‘ब्लड ब्लोकअप’ देखिएपछी राजपाका नेता महन्थ ठाकुर आइसीयुमा भर्ना, अवस्था गम्भीर !
ARCHIVE, COVER STORY, POLITICS » ‘ब्लड ब्लोकअप’ देखिएपछी राजपाका नेता महन्थ ठाकुर आइसीयुमा भर्ना, अवस्था गम्भीर !
काठमाडौँ- नेता महन्त ठाकुर अस्वस्थ भएका छन् । स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि उनलाई आइसीयुमा भर्ना गरिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालको आइसीयुमा भर्ना भएका हुन् ।
संयोजक ठाकुर नियमित चेकअपका लागि चैत २७ गते दिल्ली पुगेका थिए । उनको स्वास्थ्य जाँच गर्दा मुटुमा ‘ब्लड ब्लोकअप’ देखिएपछि थप उपचारका आईसीयूमा भर्ना गरिएको राजपा नेपालका प्रवक्ता कृष्ण सिंहले जानकारी दिएका छन् ।